Umaka: instagram | Martech Zone
Amaqhinga ayi-7 Aphumelele Abakhangisi Abasebenzisana Nawo Abasebenzisa Ukushayela Imali Engenayo Emabhrendi Abayikhuthazayo
ULwesibili, April 12, 2022 ULwesibili, April 12, 2022 Ksana Liapkova
Ukumaketha okuhlangene kuyindlela lapho abantu noma izinkampani zingathola khona ikhomishini yokumaketha uhlobo lwenkampani, umkhiqizo, noma isevisi. Ubuwazi ukuthi ukumaketha okuhlangene kuhola ezentengiselwano zomphakathi futhi kukuligi efanayo nokumaketha nge-imeyili kokukhiqiza imali engenayo ku-inthanethi? Isetshenziswa cishe yizo zonke izinkampani, yingakho-ke iyindlela enhle yokuthi abagqugquzeli nabashicileli bayihlanganise emisebenzini yabo. I-Affiliate Marketing Key Statistics Affiliate akhawunti wokumaketha isikhathi esingaphezu
Iminyaka eyishumi edlule isebenze njengenye yokukhula okukhulu kokumaketha kwabanamandla, ikusungula njengesu okufanele libe nalo lemikhiqizo emizamweni yabo yokuxhumana nezithameli zabo ezibalulekile. Futhi isikhalo sayo sihlelelwe ukuthi siqhubeke njengoba amabhrendi amaningi ebheka ukusebenzisana nabagqugquzeli ukukhombisa ubuqiniso bawo. Ngokukhula kwezentengiselwano zomphakathi, ukusatshalaliswa kabusha kwemali yokukhangisa ukuze kuthonye ukumaketha okuvela kumabonakude nabezindaba ezingaxhunyiwe ku-inthanethi, kanye nokwenyuka kokwamukelwa kwesoftware evimba izikhangiso ebhuqa.